Kurdiyiinta iyo Xukumada Suuriya oo ku heshiiyey iska caabbinta dagaalka Turkiga | Baligubadlemedia.com
Kurdiyiinta iyo Xukumada Suuriya oo ku heshiiyey iska caabbinta dagaalka Turkiga
Ciidamada Suuriya ayaa laga howl geliyey waqooyiga Turkiga si ay isaga caabbiyaan dagaalka Turkiga uu halkaasi ka wado iyaga oo heshiis la galay Kurdiyiinta si ay dagaalka isaga kaashadaan.
Haddaba heshiiska muxuu yahay?
Khariidadda Waqooyiga Suuriya
Maxaa keenay iney ciidamada Mareykanka ka baxaan aaggasi?
Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper wuxuu mar sii horreysay sheegay inuu Mareykanka 10,000 askari uu kala baxayo waqooyiga Suuriya xilli la filayey inuu Turkiga deegaannadaasi uu dagaal ku qaado.
Isaga oo sharraxaya xaalada halkaa ka jirta waa “lama-huraan”, wuxuu sheegay in SDF ay “indhaha ku haysay inay kala goyso heshiiska” dowladda Siiriya iyo Ruushka si looga hortago weerarka Turkiga.
Wuxuuna Mareykanka uu sheegay inuu go’aansaday inuu ka baxo waqooyiga Suuriya oo uu ku sii badanayey “khilaafka labada ciidan u dhaxeeya”.
Axaddina wuxuu madaxweyne Trump uu bartiisa Tweetarka uu ku qoray “waa fikir caqli badan” inaan dagaalkaasi qayb laga noqon isaga oo weli raaciyey, dagaallada ka socda Bariga Dhexe in laga qayb qaatana ay tahay khalad.